Yakachipa Customizable Kuisa & Kuendesa feeder Machine Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Kurodha & Kudya Muchina?
Kushandiswa kwe Kuisa & Kudyisa Muchina seye mbishi zvinhu yekuchengetera mukuita kwekugadzira manyowa nekugadzirisa. Ichowo rudzi rwekuendesa michina yezvakawanda zvinhu. Ichi chishandiso hachigone chete kuburitsa zvakanaka michina ine chidimbu saizi isingasviki 5mm, asi zvakare zvinhu zvakawandisa zvinopfuura 1cm. Iyo ine simba inochinjika uye inogadziriswa irikupa kugona uye inoenderera yunifomu irikupa dzakasiyana siyana zvigadzirwa. Iyo michina yakagadzirirwa anti-kupwanya mambure, vibration anti-ichivharira mudziyo, frequency kutendeuka kumhanya inodzora chishandiso, inogona kuwana yunifomu kuburitsa uye kunyatso kudzora kwekuburitsa vhoriyamu.
Chii chinonzi Kugadziridza & Kudya Muchina unoshandiswa?
Seimwe nzira, iyo Kuisa & Kudyisa Muchina inoshandiswa kutakura zvinhu kubva forklift. Inoshandiswa zvakanyanya kuendesa hupfu, granule kana zvidiki zvidhinha, kazhinji inogona kushandiswa neumwe muchina. Inogona kuzadzisa yunifomu uye ichienderera ichidhonza kuponesa vevashandi uye nekuvandudza basa kunyatsoita mupfudze yekugadzira mutsara.
1. Slot ndiro inoshandisa mbiri arc ndiro kuti inyatso kudzivirira kudonha.
2. Iyo tambo yekusunga inotora chimiro umo mutoro wekutakura uye wekusudurudza wakaparadzaniswa, izvo zvinovandudza kugona kweanopa ndiro yekumira pakukanganisa mutoro.
3. Muswe unokakavara mudziyo unopihwa dhisiki chitubu, icho chinogona kudzikisira kukanganisa kwecheni inononoka uye kugadzirisa hupenyu hwebasa reketani.
4. Chidimbu cheplate feeder ine zvikamu zvishanu: mudziyo wekutyaira musoro, chigamba vhiri mudziyo, tensioning mudziyo, cheni ndiro uye furemu.
5. Mboro ine yekuvhundutsa absorb yekuvhundutsa absorbers, uye yepakati ine yakakosha yekuvhundutsa absorber roller rutsigiro yekuvandudza iyo hombe block. Izvo zvinhu zvinokanganiswa nemhedzisiro yeairovha uye iwo mahwendefa e groove pamativi ese maviri kunatsiridza hupenyu hweanomhanya zvikamu.
Kuisa & Kudyisa Muchina Inoumbwa nehuremu sisitimu, ketani ndiro inoendesa mashandiro, silo uye furemu; imomo cheni ndiro, ngetani, pini, chinotenderera uye nezvimwe zvekuburitsa michina vakapfeka zvikamu zvine simba rakasiyana uye mafambiro. Yekutanga kupfeka uye kubvaruka deformation kunoda kugara uchigadziriswa uye kutsiva; iyo cheni yeplate feeder ine yakasimba kuomarara uye inogona kuchinjira kune hombe hombe yezvinhu ine imwe granularity. Huwandu hwe hopper hwakakura, hunogona kupfupisa nguva yekudyisa ye forklift, asi panguva imwecheteyo cheni yeplate yekumhanyisa kumhanya inononoka, iine kugona kukuru.
Zvimiro zveKutakura & Kudyisa Muchina
1.Iine hukuru hukuru hwekutakura uye kureba kwekufambisa nzvimbo.
2. Yakagadzikana uye inoshanda zvakanyanya kushanda.
3. Yunifomu uye inoenderera ichisiya
4. Saizi ye hopper uye modhi yemota inogona kugadziriswa zvinoenderana nekwanisi.
Kuisa & Kudyisa Muchina Vhidhiyo Ratidza
Kuisa & Kudyisa Machine Model Sarudzo
Simba rekusanganisa: 2.2kw
Vibration simba: (0.37kw
Simba rekuburitsa: 4kw frequency kutendeuka
Vibration simba: 0.37kw
Pashure: Vertical Disc Kusanganisa feeder Machine
Zvadaro: Otomatiki Packaging Machine